Sida loogu xiro Windows PC kumbuyuutarka laga rakibo Mac | Waxaan ka socdaa mac
Francisco Fernandez | | Mac App Store, Tababarada
Haddii aad haysato kombiyuutar leh Windows operating system oo shaqada desktop-ka fogna ay shaqeyneyso, waxaa macquul ah inaad waligaa isweydiisay haddii ay jirto wax suurogal ah oo kombiyuutarkaas looga heli karo Mac, maxaa yeelay mararka qaarkood waxay noqon kartaa mid waxtar leh inaadan ka shaqeynin kombiyuutarka kombiyuutarka qeybta saddexaad, iyo inaad awood u yeelatid inaad xiriir ka sameysid si toos ah Mac, sida looga samayn karo kombiyuutar kale oo Windows ah.
Hagaag, xaaladdan, inkasta oo aysan sidaa u fududayn maadaama macOS uusan lahayn qalab imanaya oo horay loo sii rakibay oo kuu oggolaanaya inaad tan si gaar ah u sameyso, runtu waxay tahay inay sameyso waxaad samayn kartaa xiriir desktop fog ka Mac kasta, tanna waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad rakibto codsi.
Ku xir kumbuyuutarradaada Windows-ka ee Mac leh Microsoft Remote Desktop
Sidaan soo sheegnay, markan ka Microsoft kama aysan dhigin wax dhib badan kuwa isticmaala ee doonaya inay isticmaalaan desktop-ka fog ee ka socda Mac, maadaama ay u abuureen codsi, taas oo iyaduna aad u fudud in la isticmaalo oo bilaash ah, in kasta oo xaaladdan ay leedahay cillado yar, waana taas waxaa lagu heli karaa oo keliya Ingiriisi.
Si kastaba ha noqotee, si aad ugu xirto kumbuyuutarkaaga Windows ee ka socda Mac, waxa ugu horeeya ee aad u baahan doontaa waa kuwan soo socda:
Windows PC (doorbidayaa Windows 10 inuu si fiican u shaqeeyo), oo loo qaabeeyey inuu u oggolaado isku xirnaanta fog kombiyuutarrada kale.
IP-ga ayaa sheegay in qalabka lagu xiri karo.
Isticmaalaha iyo lambarkiisa sirta ah ee aad rabto inaad si gaar ah u hesho.
Codsiga Desktop Remote ee Microsoft ee ku saabsan Mac-gaaga.
Markaad tan ururiso oo si sax ah u duubto, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad ku xirto markii ugu horeysay kumbuyuutarkaaga meel fog, taas oo aad kaliya u baahan tahay inaad raacdo talaabooyinka soo socda:
Fur arjiga Remote Desktop-ka Mac-gaaga ka dibna dhagsii ku dar astaan, oo xulo "Desktop" (ama "Desk" Isbaanish). Haddii ay dhacdo in saaxirku si otomaatig ah u soo muuqday, uma baahnid inaad sidan sameyso, kaliya sii wad qaabeynta.
Beerta la yiraahdo "Magaca PC", qor cinwaanka Kombiyuutarka Windows su'aasha aad rabto inaad ku xirto, ama kan magaca martida haddii ay dhacdo inaad labadiinaba kumbuyuutar ku haysataan isku xirnaan shabakadeed.
Marka tan la sameeyo, duurka ku ah "Koontada Isticmaalaha", waxaad haysataa laba ikhtiyaar oo suurtagal ah, iyadoo kuxiran waxa aad shakhsi ahaan doorbideyso:
U daa sida "I weydii markasta", si markasta oo aad rabto inaad mar kale u hesho kombiyuutarka, waxaad u baahan tahay inaad gacanta ku gasho username-ka oo ay weheliso lambarkiisa sirta ah, kaasoo waxtar yeelan kara haddii aad leedahay isticmaaleyaal badan oo laga abuuray Windows PC, oo aad rabto inaad ku xirnaato wakhti kasta midkood baa ka duwan.
Samee koonto isticmaale, oo aad ku badbaadin karto hal ama in ka badan oo isticmaale si aad ugu hesho kombuyuutaradaada si dhakhso leh, maadaama aanad u baahnayn inaad gasho magaca isticmaalaha ama lambarka sirta ah. Haddii aad xiiseyneyso tan, kaliya waa inaad doorataa ikhtiyaarka "Ku dar Koontada Isticmaalka ...", ka dibna geli magaca isticmaalaha, lambarka sirta iyo magaca guud ee la isticmaalo haddii aad rabto.
Taas ka dib, waa inaad kaliya dhagsii badhanka "Keydi" (ama "Badbaadinta" Isbaanishka), iyo liistada ayaa si toos ah ula soo muuqan doonta aaladaha kala duwan ee aad keydisay inaad isku xirto.
Kaliya waa inaad gujisaa midka aad qaabeysay, ilbidhiqsiyo gudahoodna wax walba waa la qaabeyn doonaa iyo waad ka heli kartaa dhib la'aan, iyo haddii wax waliba hagaagaan, u isticmaal sida inay yihiin kumbuyuutarka Windows laftiisa, kaliya daaqada gudaheeda.
Markaad tan sameyso, waxay kuxirantahay nooca Windows ee aad ku rakibtay kumbuyuutarka aad ku xiran tahay, waxaad ku hagaajin kartaa taxane taxane ah qaabeynta, sida suurtagalnimada in xallinta si otomaatig ah loogu waafajiyo cabbirka daaqadda, ama aad doorato sidaad u jeceshahay wax walba si aad u eegto xagga tayada, in kasta oo kuwani ay haddaba yihiin waxyaabo ikhtiyaari ah oo ku tiirsan dookhaaga shakhsi ahaaneed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo fog desktop ku xirmaan Windows computer ka Mac ah
Tani si fiican ayey u shaqeysaa, laakiin weligey ma helayo daabacaddu inay si sax ah u shaqeyso.
Ku jawaab Francisco José
Waa wax lala yaabo. Wixii aan soo arkay, fiilada kiiskeyga dhib malahan, laakiin markaan daabacayo adoo adeegsanaya Wi-Fi-ka PC-ga si aad ugu xirto daabacaha, waxay umuuqataa inay dhibaatooyin jiraan ... Sikastaba, waxaan u maleynayaa inay yeelan doonto wax ay sameyso taasna waxaa leh calaamadda desktop-ka fog oo isla meeshaas laga soo diro, laakiin haye, waxaan dhihi karaa noocyada mustaqbalka ee dalabka ama Windows-ka ayaa xalku imaan doonaa 😉
Waxay u shaqeysaa sifiican laakiin ma daabacan karo anigoo adeegsanaya madbacad leh fiilo ama wifi, ???
Ku jawaab Maite
Ma helayo liiska meelaha shaqada, sidaa darteed ma heli karo mac-keyga aan ku xusho.
AAD BAAD U MAHADSAN TAHAY CAAWIMAADAADA, WAAD MAHADSAN TAHAY FAAFINTAADA AAN KU SAMEEYAY 10 DAQIIQO. MAHADSANID
Galab wanaagsan, waxaan raacaa tillaabooyinka, laakiin markii aan helo magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah waxay ii sheegtaa inaysan sax ahayn oo aanan ku xidhi karin xafiiskayga pc.
Galab wanaagsan oo aad ayaad ugu mahadsan tahay maqaalka:
Waxaan hayaa wax yar oo duug ah oo ah buugga 'mac book pro', kaas oo aanan ku rakibi karin qalab casri ah El Capitan OS (10.11) sidaa darteed Apple Store iima oggolaan doonto inaan helo oo aan rakibo Remote Desktop (v. 10.3) Waxaan isku dayayaa inaan ka soo dejiyo nuqulkii hore ee barnaamijkan (Desktop Remote 8.0.44) laakiin ma awoodo.
Haddii aad i caawin lahayd way fiicnaan lahayd.
Ku jawaab Rafa Palacios
Salaan! Waxaan haystaa dhibaato la mid ah tan Rafa, waxaan u baahanahay nooc duug ah oo desktop-ka fog ah.
Waad ku mahadsantahay caawimada.
Haye, kiiskeyga aniga ima shaqeynayo maxaa yeelay markaan isku dayayo inaan xirmo waxay i siisaa lambar qalad ah 0x204. Xitaa ma weydiinayso username-ka iyo lambarka sirta ah ee kombiyuutarka la tagayo.
Ma ogtahay waxa dhici kara?
Ku jawaab mar
Dhibaato la mid ah tan Mar, ma ogtahay haddii xal jiro?
Wanaag isla waxa igu dhaca aniga kiiskeyga aniga ima shaqeynayo maxaa yeelay markaan isku dayo inaan isku xiro waxay i siisaa lambar qalad ah 0x204. Xitaa ma weydiinayso username iyo lambarka sirta ee kombiyuutarka bartilmaameedka ah.
Ku soo jawaab Corina
Galab wanaagsan! Waxaan qabaa dhibaatada soo socota, haddii aan u isticmaalo Microsoft Remote Desktop-ka MAC-kayga oo leh isku xirka gurigeyga WIFI, ma shaqeynayo.
Hadda, haddii aan ku adeegsado internetka ay bixiso taleefankayga gacanta, wuxuu si aan kala go 'lahayn ugu xiraa kumbuyuutarka kumbuyuutarka.
Ma ogtahay waxa dhibaatadu noqon karto?